Ezinye iimpawu bonus ezintsha, bemlinga 1,600 zemali jackpot, Microgaming uwusondeza kuni bonke Bar Bar Black Sheep slot entsha! Ngaba nawe nje ezazikho elikhulu ubuntwana aze nursery exabileyo entlokweni yakho? kakuhle, ukuba ufanele ukuba abe kwaye kuya kubakho ixesha elithile ngoku! Top slot Site kuzisa kuni eli slot emangalisayo kunye iqhayiya Microgaming.
Ngokuqinisekileyo uya kunandipha le slot ukuze setup kwayo 5×3 bayotywe kwaye 15 paylines fixed. Uyakwazi ukubheja ubuncinane 0.15 kunye ukubheja ubuninzi 150.00. Kungenxa abadlali zonke iintlobo ', nayiphi na imali onayo – ukhethe eyakho ngokukhululeka! umnikelo 96% RTP no 32% iyonke frequency hit, Bar Bar Black Sheep slot na oya kuyo!
Iisimboli kunye Ukudlala:
Microgaming uye ngaphaya umda bobuchule isicelo nursery nemvumelwano umxholo kule slot. Uza kufumana ukudlala kwifama kunye beegusha ngeenxa zonke. Lo matshini slot bunikwa phambi isibhakabhaka eluhlaza ukulungele ukuba ndininike kwimboni ngokwendlela nokubheja yakho. Isimboli Ixabiso eliphezulu ziquka Black Izimvu, Sheep White, Bar single, Kabini Bar and Triple Bar. Izimvu black yi endle kulo mdlalo yaye oko ke ukuba uwine ezinye mabhaso ezinkulu.
Playing Bar Bar Black Sheep ilula. Ubungakanani lwemali yakhona phakathi 0.25 kwaye 5.00. Le hexa iphezulu 96% RTP uphendulela lo mdlalo yaba ukhetho olukhulu abahola cash real. It has zombili iisimboli zasendle agcwayele kunye ibhaso ubuninzi unokoyisa is 1,600 iinkozo.
osebenzisa Free kunye neempawu Bonus:
Le slot ekunika 10, 15 kwaye 20 osebenzisa free xa ufika 3, 4 kwaye 5 iisimboli uwasasaze naphi na kwi reel ngokulandelelanayo. Ezinye amabhaso elungileyo ugalele xa une ijikelezisa simahla esandleni sakho. Unga retrigger le spin ibhonasi free kunini ukuhlangabezana imiqathango yalo msebenzi.
Ukwengeza, lo mdlalo ukunika omnye inkalo kukuvuza nge 3 wokuphindaphinda nemivo. Indlela isebenze Sheep yebhonasi Bar Bar Black kukuba kokufika kwi weesimboli ezimbini bar kunye isimboli emfutshane abamnyama kumqolo omnye. Ukuba wenza oku, amathuba kokuphumelela jackpot umvuzo ukunyuka. Asinto umdlalo slot progressive, kodwa wathola iisimboli Ixabiso eliphezulu kunye zasendle angakunika ezinye mabhaso ezingalindelekanga enkulu.
Bar Bar Black Sheep ngumdlalo enkulu kubantu abatsha kweli hlabathi kwenzeka of Azisekho online. Nangona nkqu abadlali rhoqo nga kunandipha nakulena! Bambani tabs yakho okanye phones ngoku kwaye ukujija ngathi akukho ingomso!